Australia oo garab weydiisatay dadka dalxiiska u jooga waddankeeda - BBC News Somali
Dadka dalxiis ahaanta ama oggolaanshaha shaqo ku jooga waddanka Australia ayaa loo fasaxay inay iska sii joogaan dalkaas haddii ay gacan ka geysanayaan gurmadka dabka ka kacay keymaha.
Markii hore, sharciga Australia wuxuu dadka dalxiiseyaasha ah iyo shaqaalaha ajaanibta ah siinayay oggolaansho dal ku gal oo lix bilood ah - laakiin hadda waxaa taas laga dhigay 12 bilood.
Ku simaha wasiirka socdaalka ee dalkaas ayaa sheegay in sharcigan cusub uu ku saabsan yahay "sidii ay Australia ku heli lahayd dad caawiya, ilaa intii ay heli karto".
Sida ay mas'uuliyiinta dowladda sheegeen, sharciyadan cusub ayaa dhaqan galay islamarkii lagu dhawaaqayba.
"Dadkan reer Australia ee shaqada adag haya waxaa saameyn ku yeeshay dabkii dhawaan ka kacay keymaha, laakiin laga billaabo maanta waxay lix bilood oo dheeraad ah shaqaaleysiisan karaan dadka daxiiseyaasha ah iyo kuwa oggolaanshaha shaqada ku jooga, iyagoo ka caawinaya dadaallada ay ku jiraan xilligan adag", waxaa sidaas lagu yiri bayaan uu soo saaray wasiir Alan Tudge.
"Taas micnaheeda waa in dadka dalxiiseyaasha ah ay gacan ka geysan karaan dib u dhisidda guryaha, xeyndaabyada iyo beeraha, waxay kaloo ka qeyb qaadan karaan burburinta dhismeyaasha la dayactirayo, dhulka qashinka dabka laga nadiifinayo iyo sidoo kale dib u habeynta biyo xireennada, waddooyinka iyo jidadka tareennada".
'Waxaan rabnaa caawinaad loo dhan yahay'
Australia ayaa badanaa sanad kasta wuxuu dab ka kacaa keymaha, laakiin dabkii kacay xagaagii ugu dambeeyay ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee dalkaas soo maray abid.
Xaalad deg deg ah ayaa lagu dhawaaqay bishii November ee sanadkii 2019-kii, wax roob ahna ma jirin ilaa laga soo gaaray bishan February, 2020-ka.
Roobabkii da'ay bishan ayaa soo afjaray dabkii ka socday keymaha gobolka New South Wales, laakiin waxay sababeen fatahaado saameeyay qeybo ka mid ah Australia.
Sharciga cusub ee ay soo saartay wasaaradda socdaalka kuma koobna oo kaliya in dalxiiseyaasha ay kordhiyaan waqtiga ay joogayaan, balse wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa inay codsadaan visa ay kusii joogi karaan sannad kale.
Horay waxaa arrintan loogu fasixi jiray oo kaliya dadka gobollada ka shaqeeya - taasoo Mr Tudge uu sheegay in saddex meelood hal meel oo ka mid ah dadka ajaanibta ah ay sameyn jireen.
"Geela haddey naceen annaga macaawino ahaan hannoo siiyaan"
Dab khatar ba’an ku haya magaalada ugu weyn Australia
Dabkii ka kacay Australia wuxuu dhibaato weyn u geystay dadka reer miyiga ah
Wuxuu wasiirka u sheegay Idaacadda 2GB in shaqada dhismaha ay hadda noqoneyso mid loogu xisaabtamo dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaas, si ay iyaguna sii joogitaankooda u dheereeyaan.
"Waxaa la sameeyay isbadallo badan oo lagu raadinayo dad dheeraad ah, sababtoo ah waxaan rabnaa in howshan aan loo kala harin", ayuu yiri wasiirka.
Wuxuu sheegay in dadkan ajaanibta ah qudhooda ay arrintan dani ugu jirto.
"Ajaanibtu waxay doonayaan inay lacag helaan kaddibna ay waxay ku isticmaalayaan muddo gaaban, sidoo kalena bulshooyinka deegaanka way ka faa'iideysanayan xooggooda", ayuu yiri.
Wasiirka ganacsiga, dalxiiska iyo maalgashiga ee Australia, Simon Birmingham, ayaa sheegay in helitaanka dad dalxiiseyaal ah oo dheeri ah "ay gacan ka geysaneyso in ganacsigii deegaannada saameyntu gaartay dib loo soo nooleeyo".